26 septambra 2021 | Fiofanana kognitive
Archives isam-bolana ho an'ny: "Aogositra, 2021"
Aphasia sy fiantsoana anarana: aleo fambara am-bava na an-tsoratra?
Alohan'ny hanombohana: amin'ny 18 sy 19 septambra dia hisy ny andiany manaraka amin'ny fampianarana an-tserasera (Zoom) "Ny fitsaboana aphasia. Fitaovana azo ampiharina ". Ny sarany dia 70 €. [...]
Ahoana raha ny lovia no manasa ny vadiny? Ny kinova vaovao amin'ny "Halatra Cookie"
Fanadihadiana kabary sy fitantarana: fitaovana roa lehibe
Fitsapana maro amin'ny fanombanana ny kabary amin'ny ankizy sy ny olon-dehibe no miantehitra amin'ny hetsika atao amin'ny anarana na ny fisafidianana ny valiny samihafa. Na dia mahasoa aza ireo fitsapana ireo [...]